सूर्योदय लघुवित्तको खुद नाफामा ८७% को बढोत्तरी, जगेडा कोष ४.३२% ले घट्यो, प्रतिसेयर आम्दानी रु. ३३.९१
काठमाण्डौ । सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफामा ८७ प्रतिशतले बढोत्तरी गर्न सफल भएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा संस्थाले १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा...
महुली लघुवित्तको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक; खुद नाफामा ७७.५३% को छलाङ, प्रतिसेयर नेटवर्थ रु. २८९.४१
काठमाण्डौ । महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफामा ७७.५३ प्रतिशतले छलाङ मारेको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा संस्थाले २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको...
नागबेली लघुवित्तको खुद नाफा रु. ३.५५ करोड, जगेडामा १४८.०४% को छलाङ
काठमाण्डौ । नागबेली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफा १.१३ करोड रुपैयाँ बढाउन सफल भएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा संस्थाले २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन...
एभरेस्ट बैंकले २६% सम्म लाभांश बाँड्न सक्ने, खुद नाफा १७.९८% ले वृद्धि, प्रतिसेयर आम्दानी रु. ३७.९५
काठमाण्डौ । वित्तीय सूचकहरुमा आकर्षक छलाङ मार्दै एभरेस्ट बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २६.९८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बनाएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको हो । समीक्षा अवधिमा बैंकले ३ अर्ब ४ करोड खुद नाफा आर्जन गरेको...
किसान माइक्रोफाइनान्सको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक; खुद नाफामा ८१% को बढोत्तरी, प्रतिसेयर आम्दानी रु. २५.७०
काठमाण्डौ । अधिकांश वित्तीय सूचकमा सन्तोषजनक प्रगति गर्दै किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खुद नाफा ८१.४७ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको छ । चौथो त्रैमास वितरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ करोड २१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा संस्थाले १ करोड २१ लाख...
विजय लघुवित्तको खुद नाफा रु. ६.२३ करोड, प्रतिसेयर आम्दानी रु. २५.३५
काठमाण्डौ । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खुद नाफा १४९.८३ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको छ । चौथो त्रैमास वितरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६ करोड २३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा संस्थाले २ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । यो हिसाबले संस्थाले...
मिर्मिरे लघुवित्तको खुद नाफा १०६.६९% ले वृद्धि, जगेडा कोषमा रु. ९.५८ करोड
काठमाण्डौ । मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अधिकांश वित्तीय सूचकमा प्रगति गर्दै खुद नाफा १०६.६९ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको छ । चौथो त्रैमास वितरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६ करोड १४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा संस्थाले २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा...
ग्लोबल आइएमई बैंकमा बिलय हुन लागेको हाथवे फाइनान्स अधिकांश वित्तीय सूचकमा कमजोर; खुद नाफा ५६.१६% ले घट्यो, प्रतिसेयर आम्दानी रु. ८.२८ मात्र
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंकसँग एक्विजिसन प्रक्रियामा रहेको हाथवे फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खासै प्रगति गर्न नसकेको देखिएको छ । चौथो त्रैमास वितरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संस्थाको खुद नाफा ५६.१६ प्रतिशतले घटेको छ । संस्थाले खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा तीन करोड १८ लाख रुपैयाँले घटेको हो...
मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको खुद नाफामा ७७.७५% को छलाङ, जगेडा कोषमा ११३.८३% ले वृद्धि
काठमाण्डौ । अधिकांश वित्तीय सूचकमा प्रगति गरेको मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७७.७५ प्रतिशले खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ। चौथो त्रैमास विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा संस्थाले ९ करोड ४७ लाख खुद...
आरएमडीसी लघुवित्तको खुद नाफा रु. ७.४८ करोड, प्रतिसेयर आम्दानी रु. ४१.५९
काठमाण्डौ । आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खुद नाफा ७ करोड ४८ लाख रुपैयाँले बढाउन सफल भएको छ । चौथो त्रैमास विवरणअनुसार संस्थाले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २९.०७ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको हो । संस्थाले समीक्षा अवधिमा ३३ करोड २४ लाख खुद रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही...
नेपाल एसबीआई बैंकले १८% सम्म लाभांश बाँड्न सक्ने, खुद नाफा १३.८४% ले वृद्धि
काठमाण्डौ । नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १८.८९ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बनाएको छ । चौथो त्रैमास विवरणअनुसार बैंकले १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफ आर्जन गरेको हो । समीक्षा अवधिमा बैंकले २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफातर्फ बैंकले १३.८४...
ग्लोबल आइएमई बैंकले २३% सम्म लाभांश बाँड्न सक्ने, खुद नाफामा ३३.०२% को छलाङ, प्रतिसेयर आम्दानी रु. २७.११
काठमाण्डौ । महत्वपूर्ण वित्तीय सूचकमा छलाङ मार्दै ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २३.५६ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बनाएको छ । चौथो त्रैमास विवरणअनुसार बैंकले २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफ आर्जन गरेको हो । समीक्षा अवधिमा बैंकले २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो...
ग्लोबल आइएमई बैंकले ९.९९% मै घर कर्जा दिने, ३ कार्यदिनभित्र पाइने
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंकले निकै सस्तो दरमा घरकर्जा दिने घोषणा गरेको छ । यो बैंकले घर कर्जा सम्बन्धी नयाँ योजना ल्याउँदै ९.९९ प्रतिशत ब्याजदरमै घर कर्जा उपलब्ध हुने घोषणा गरेको हो । घर कर्जाका लागि आवश्यक कागजातसहित आवेदन प्रक्रिया पूरा गरेको तीन कार्यदिनभित्र घर कर्जा दिने गरी नयाँ प्रडक्ट ल्याइएको बैंकले जारी गरेको...
गणपति माइक्रोफाइनान्सको खुद नाफामा १०१९.२१% को छलाङ, जगेडामा १६.१४% ले वृद्धि
काठमाण्डौ । गणपति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खुद नाफा २ करोड ७७ लाख रुपैयाँले बढाउन सफल भएको छ । चौथो त्रैमास विवरणअनुसार संस्थाले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०१९.२१ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको हो । संस्थाले समीक्षा अवधिमा ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष...
वित्तीय सूचकहरुमा लक्ष्मी लघुवित्तको छलाङ; खुद नाफामा २६.७८% ले बढोत्तरी, प्रतिसेयर आम्दानी रु. ४५.८४
काठमाण्डौ । लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खुद नाफा २६.७८ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ। चौथो त्रैमास वितरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा संस्थाले ८ करोड ७५ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा अवधिमा संस्थाले खुद ब्याज...